कहाँ–कहाँ छन् उत्तर कोरियाली शासक किमका गोप्य लगानी ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कहाँ–कहाँ छन् उत्तर कोरियाली शासक किमका गोप्य लगानी ?
भदौ २९, काठमाडौं । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनका गोप्य लगानी व्यापक रहेको जनाइएको छ । समाचारहरू अनुसार एसीया, अफ्रिका, खाडी क्षेत्र र युरोपमा किमका लगानी रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
बीबीसीका रक्षा विश्लेषकको वृत्तचित्र ‘उत्तर कोरिया : परिवारमा हत्या’मा किमको लगानीबारे उल्लेख गरिएको छ । उच्च घरानीय जीवन शैली कायम राख्नका लागि किमको परिवारका नाममा ३९ कार्यालयले जानिने विभागले विभिन्न देशमा लगानी गरेको समाचारमा उल्लेख छन् । ‘अफिस ३९’का नामले जानिने विभाग उत्तर कोरिया वर्कस पार्टीको विधानमा पनि उल्लेख छ । तर, यो विभागले विभिन्न गोप्य लगानीको काम गर्दै आएको छ ।
रक्षा विश्लेषक बर्जरले भनेकी छिन्,‘उत्तर कोरियाको विलासी जीवन र शासकको परिवारको उच्च घरानीया खर्च सम्हाल्नका लागि अफिस ३९ले गरेको लगानीको आम्दानीबाट खर्च हुन्छ जसबाट किम सँधै खुसी हुन्छन् ।’ यो विभागले किमको परिवारको लागि कम्तिमा १.२ देखि १.६ विलियन डलरसम्म वर्षको खर्च जोहो गर्दछ ।
युरोपदेखि मलेसियासम्म जहाँ एक हजार उत्तर कोरियालीले काम गरेका ठाउँमा यसको लगानी फैलिएको छ । उत्तर कोरियाली सेनाको सूचना आदान प्रदान पनि यस लगानीको क्षेत्रमा हुने गरेको छ जसलाई ग्लोकोम भनिन्छ । ‘ग्लोकोम यस्तो नेटवर्क हो, उत्तर कोरियाली सेनाको सूचना मलेसियामा पुराएर सैन्य सम्बन्धि सामानको खरिद विक्रि हुने गर्छ । जसलाई मलेसियाको सेनाले निर्माण पनि गर्दछ । उत्तर कोरियाको यो उत्तपादन अफ्रिका, खाडी र दक्षिण पूर्वी एसीयामा विक्रि गरी किमको विलासी जीवन वितिरहेको छ ।’, उनले भनेकी छिन् ।
बेलायतका लागि उत्तर कोरियाका पूर्व राजदूत योङ होले मलेसिया उत्तर कोरियाका लागि स्वर्गभूमी भन्दै व्यापार बढाउनका लागि उत्तम काममा सक्रिय रहेको बताएका थिए । मलेसीया उत्तर कोरियाका लागि भिसाफ्रि देश भएका कारणले उत्तर कोरियाली जीवन अन्य मुलुक जानका लागि सहज रहेको पनि बताइएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा
उत्तर कोरियाले फेरी गर्यो अर्को शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण !
एजेन्सी । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनका आणविक हतियारका दुई प्रमुखहरु हप्तौँसम्म देखा नपरेपछि उनीहरु […]
अमेरिकाका मिडिया किम जोङको पक्षमा
असोज ९, काठमाडौं । अमेरिकाका बहुसंख्यक राष्ट्रिय मिडियाहरू राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई घृणा गर्छन् । […]
रोहिंग्या कत्लेआममा भारत र चीनको साथ, म्यानमारमा यस्तो छ दुई देशको साझा स्वार्थ ?
असोज १, बीबीसी । डोकलाम संकट मत्थर भएको धेरै समय भएको छैन, भारत र चीनबीच सम्भावित युद्ध तत्कालको लागि […]
उत्तर कोरियाविरुद्ध अमेरिकाले आक्रमण गर्न सक्दैन : विदेशमन्त्री लाभरोभ
असोज ९, मस्को । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले अमेरिकाले उत्तर कोरियाका विरुद्ध सैनिक कारबाही गर्न […]
किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएकै हो त ?
भदौ ३०, काठमाडौं । यही सेप्टेम्बर ३ तारिखमा उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरेको बताएपछि दक्षिण […]